Umsakazi woKhozi FM uphumele obala ngokuhaqwa yiCorona
UKHATHIDE "Tshathugodo" Ngobe usazosakazela ekhaya emuva kokutholakala ukuthi uhaqwe yigciwane leCorona kodwa waqinisekisa ukuthi uwumqemane Isithombe:ESIGCINIWE
ISILOMO soKhozi FM, uKhathide "Tshathugodo" Ngobe uphumele obala ngokuhaqwa yigciwane leCovid-19 ohlelweni alusakaza noNongcebo McKenzie, Isidlo Sasekuseni. UTshathagodo, obesakaza engekho e-studio benoNongcebo, uthe okumenza angafeli ngaphakathi ukuthi akafuni kuthiwe "owoKhozi ubangwa nezibi, kwembulwa kwembeswa."
Uthe uphila saka njengesheleni futhi akanazimpawu zokuthi uneCorona. Kwi-video uTshathugodo ubehlolelwa leli gciwane futhi wabe sebhala kanje: "Besisayobheka ukhuvethe ukuthi alukagudli yini ngakithi. Manje kukhona lapho okufanele ngibe khona kule nyanga ezokwethwasa, manje angikwazi ukuvaleleka ngaphandle, ngifuna ukuzibonela ngawami."
Uthe okumenze ayohlolwa ukuthi lapho azobe eyekhona kuthiwe ngeke angene khona engahlolelwaga igciwane. Uthe ibuyile imiphumela yaqinisekisa ukuthi usenalo leli gciwane. "Kodwa zingekho zimpawu ezikhona, ezikhombisa ukuthi ngiyagula, nginomkhuhlane, akukho lutho nje, ngiyaziphilela." Uthe nodokotela umncome kakhulu ngokusukumela ukuzihlola kusenesikhathi. "Phansi amaphaphu!"
Uthe isifundo asifundile ukuthi kungezeka ube wumqemane kanti sewunalo lleli gciwane. Ube eseqwashisa ngeCorona futhi wagqugquzela nomphakathi wakuleli ukuba uzihlole futhi uthobele imithetho yabezempilo ukuze kunqandeke ukubhebhetheka kwaleli gciwane. Isidlo Sasekuseni besisakazwa nguKhetha "KSG" Gwala kodwa bemlekelela kancane oTshatha noNongcebo.
Nasezinhlelweni zasekuseni bekunezinguquko njengoba Ezanamuhla bezisakazwa nguDumisani Ndimande futhi seziqala ngo5.30. Nohlelo lukaDudu "Lady D" Khoza belusakazwa nguBheka "Beekay" Mchunu. Izindaba namanqampunqampu bekungekho.
Okhulumela iSABC, okungaphansi kwayo Ukhozi FM, uMmoni Seapelelo, ukuqinisekisile ukuthi ukhona ezindlini zokusakaza zakwaSABC, KwaZulu-Natal, otholakale naleli gciwane. Uthe okwamanje abasakazi bazosakazela evenini abavamise ukuyisebenzisa ngesikhathi kusafuthwa ngezibulalimagciwane emahhovisi nasezitudiyo kuze kushaye uMsombuluko. Abanye abasebenzi bakwaSABC abake baba ndawonye noTshathugodo nabo bazohlolwa ukuthi abathelelekanga yini.